Cabdisiciid wali wuxuu u ooman yahay dhiigga reer Muqdisho | KEYDMEDIA ENGLISH
Cabdisiciid wali wuxuu u ooman yahay dhiigga reer Muqdisho
Cabdisiciid, wuxuu geed dheer iyo mid gaaban u koray in Tiina, tirtirto qoraalkaas, wuxuuna safaaradda u diray waraaq uu ku sheegayo, in Dowladda Federaalka ka xumaatay hadalka Intelmann, una arkaan fara-galin lagu sameynayo amniga gudaha.
MUQDISHO, Soomaaliya – Wasiirka Arrimaha Dibadda Soomaaliya, Cabdisiciid Muuse, ayaa mar kale muujiyay sida uu ugu ooman yahay in la daadiyo dhiigga shacabka iyo siyaasiyiinta reer Muqdisho, kadib falalkii amni darro ee todobaadkii hore.
Sida ay Keydmedia Online, u sheegeen howl-wadeenno Soomaali ah, kana tirsan shaqaalaha Safaaradda Midowga Yurub ee Soomaaliya, Cabdisiciid Muuse, ayaa waraaq rasmi ah oo cabasho ah u diray Safaaradda, kadib qoraal ka soo baxay Tiina Intelmann.
Safiirka Midowga Yurub ee Soomaaliya, Tiina Intelmann, ayaa Twitter-keeda ku qortay, in ay jiraan dilal siyaasadeed, kadib khaarijintii Allaha u naxariistee, Xildhibaan Aamino Maxamed Cabdi, oo la rumeysan yahay in loo beegsaday si loo duugo kiiska Ikraan.
Hayeeshee, Cabdisiciid, wuxuu geed dheer iyo mid gaaban u koray in Tiina, tirtirto qoraalkaas, wuxuuna safaaradda u diray waraaq uu ku sheegayo, in Dowladda Federaalka ka xumaatay hadalka Intelmann, una arkaan fara-galin lagu sameynayo amniga gudaha.
Sidoo kale, Cabdisiciid, wuxuu lacag xooggan ku bixiyay in kooxda baraha bulshada ku difaacda Farmaajo, ay duullaan faallooyin ah ku qaadaan, bogga Safiirka Midowga Yurub, kuwaas oo qoraallo af-lagaaddo u badan jawaab kaga dhigay hadalkii Tiina Intelmann.
“Waraaqda uu qory Cabdisiciid, waa ay aqbashay safaaraddu oo waa la tirtiray qoraalka, iyadoo la eegayo saanyaalaha diblumaasiyadeed oo la og yahay in uusan wax xushmad ah u heyn, Wasiirka Arrimaha Dibadda oo u taagan difaaca Farmaajo”, ayuu yiri Sarkaal ka cudur daartay in magaciisa la baahiyo.
Cabdisiciid, wuxuu siyaasadda Soomaaliya, soo galay, markii uu xilka Madaxweynaha Soomaaliya ku guuleystay adeerkiis Cabdullahi Yuusuf, wuxuuna ka mid ahaa, shaqsiyaadkii indhaha u ahaa ciidankii Itoobiya ee xasuuqa ka geystay Muqdisho.
Markii uu xilka ka degay Cabdullahi Yuusuf, Ciidamadii Itoobiya-na, ka baxeen caasimadda, waxaa lagu abaal-mariyay inuu madax ka noqodo barnaamijka horumarinta Itoobiya ee hey’adda “NISF”, taasoo uu ku muteystay xasuuqii loo geystay shacabka Muqdisho.
Farmaajo oo qorshihiisu yahay inuu xilal iyo darajooyin ku tixo shaqsiyaadka Hawiye naceybka ku suntan, ayaa 2017 u magacaabay la-taliyaha amnigiisa, isaga oo aan u eegin lahaan-shiyaha khibrad amni iyo aqoon ciidan midna, kaliya nin-jecleysi iyo naas-nuujin.
Wuxuu xogo qaldan si joogto ah waligiis u siinayay wakiillada beesha caalamka ee farriintiisu gaari karto, wuxuuna qeyb ka mid ah ciidanka XDS, ku tilmaamay (Maleeshiyo beeleed), taas oo sababtay in ay waayaan xuquuqaadki ay ku lahaayeen Dowladda.
Cabdisiciid Muuse, hadda isaga oo ku magacaaban Wasiirka Arrimaha Dibadda Soomaaliya, wuxuu wali muujinayaa, heerka uu gaarsiisan yahay ciilka iyo cuqdadda uu u hayo reer Muqdisho, wuxuuna diiddan yahay in adduunku ka hadlo dhibaatada shacabka kadeedan.
Dilka Siyaasadeed oo ay sheegtay, Tiina Intelmann, waa khaarijintii, AUN, Xildhibaan Aamino, taas oo 2019-kii baarlamaanka 10-aad ka hor sheegtay in Kooxda Farmaajo, qaar ka mid ah ciidanka XDS ku sunteen kuwo qabiil, iyadoo raaceysa hadalkii Cabdisaciid.